Kukangaki, emva isithombe amateur Kuphendula ukuthi sithanda ubambe umhlangano nabangane noma kokushiya eholidini, kukhona eziningi izithombe, phakathi lapho bethola kancane ukufiphala, nokucija usongene. Susa kubo isihawu, ngoba Uhlaka ngamunye siqu ezibalulekile yayo. Ngakho-ke, kukhona eyodwa kuphela indlela yokuphuma - Photoshop. Focus kulesi sihleli ingcaca kungenziwa ngcono kakhulu. Lokhu kwenziwa kakhulu ukumane, kungakhathaliseki indlela ekhethiwe, ukuthi kukhona nesklko.
Okokuqala, usivule Photoshop isithombe ofuna ukuthuthukisa. Manje phezulu imenyu ibha, ukhethe "Layer", futhi okuya uhlu ukhethe "Layer eliyimpinda." Ngo palette, ukubonisa izingqimba, uzobona indlela kwakukhona ikhophi isithombe sakho. Manje, ukwandisa nokucija izithombe, yiya engxenyeni ethi "Hlunga" (kuleliphuzu e okufanayo phezulu imenyu ibha) bese ukhetha "Ubukhali" noma "imimese" (e izinguqulo ezahlukahlukene ongakhetha umhleli anamagama ahlukene). Beka isikhombisi kule ndawo, uzobona omunye imenyu eyehlayo, okuyinto kuyodingeka ukhethe "Lola smart '. Lokhu kuvula ifasitela nge ubuka isikrini amancane kushelela. At shot ezincane esibukweni eshukunyiswa engalibaleki ngayo igundane, futhi izilayidi add nobe sinciphise nokucija.
Isinyathelo esilandelayo ukuthuthukisa nokucija ku-Photoshop, kuyoba omunye "impi" in the "Hlunga", lapho udinga ibe "Ubukhali" khetha "Isivuvu esingakhanyisiwe". Nalapha phambi kwakho iwindi nge kwesikrini wokubuka futhi ethinta ngezilayidi. Ngosizo lwabo, ungalungisa nokucija isithombe. Kuyaphawuleka ukuthi imiphumela yezenzo zabo, niyogcina isithombe esikhulu. Kuyinto elula kakhulu, kanye uzokwazi ukubona ingxenye izithombe ukulungiswa, futhi yonke yaphelela. Njengoba masinyane njengoba you uyokwaneliswa umphumela, uqhebeza OK.
Ubukhali ku-Photoshop kungathuthukiswa futhi lokhu ngendlela: Vula isithombe bese udala ungqimba impinda, njengoba kuchaziwe ngenhla. Bese ufaka imenyu (iphaneli engenhla), "Isithombe", bese ucinga "ukulungiswa" okukhethwa kukho, futhi kuwo - umsebenzi "Washout". Ngesikhathi ophumayo uthola isithombe ngombala omnyama nomhlophe. Qaphela ukuthi uma isithombe ngokwawo omnyama nomhlophe, akudingekile ukuba discolor. Ungakwazi nje ukuya "Hlunga", khetha lapho into "Okunye", futhi ke - umsebenzi "umbala Ngokuphambene". Ngo isinciphisi iwindi sifinyelele Ngokuphambene elikhulu, bese uchofoza OK bese ulandela "Image". Kuleli qophelo, khetha "Ukulungiswa", futhi ke - "Amazinga". Histogram bavele phambi kwakho. Kalosha polzunochki hambisa kwesokudla noma kwesokunxele, kuyilapho nokucija omnyama nomhlophe ku-Photoshop unganelisekile.
Ngemva ngokucindezela Kulungile, sibheka izingqimba Iphalethi. Lapho, ngesikhathi kakhulu phezulu udinga ukuthola sekwanele imenyu edonsela phansi lapho uthola igama elithi "ukunqwabelanisa" futhi chofoza kukho. Isithombe sakho sizoba ukuthola umbala futhi, kodwa kuyoba sobala ngokwengeziwe 'iyezwakala. Konke kufanele - kangakanani asindise Chile. Esikhathini "Ifayela" into yemenyu, thola bese uchofoza "Ugcina Njenge" bese ubhala igama elisha bese ukhetha format (uhlobo lwefayela) * .jpeg, gcina isithombe esisha futhi ngcono.
Njengoba ubona, ngcono nokucija ku-Photoshop kulula. Kulokhu, inqubo ngokwalo kuthatha imizuzu embalwa nje.
Ukuswaba Sesithombe utamatisi - isifo okungukuthi kulula ukuvimbela kunokuba ikhambi
Bartolini isifo: ukwelashwa ekhaya
Isaladi kusuka iklabishi yaseShayina - zokupheka ozithandayo.